ပိုးကိုကြိုက်တဲ့ ပိုးကိုက်ပန်းလား ပိုးကကြိုက်တဲ့ ပိုးကိုက်ပန်း လား
လက်ဆောင်အဖြစ် မရွေးချယ်သင့်တဲ့ပန်းလို့ဘဲ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ..
စင်းလုံးချော ပန်းမဟုတ်ရင်တောင် ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ အင်္ဂါနဲ့ ပြည့်စုံနေမှသာ ပန်ဆင်ဖို့ တင့်တယ်တယ် မဟုတ်လားလေ။
ပိုးကိုကြိုက်တဲ့ ပန်းတဲ့လား..။ ရင်နာစရာ ပန်းပုံပြင်လေးပါ။
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဘလော့မှာ ရေးထားတွေ သဘောကျပါတယ်။ အခုရက် အလုပ်များနေလို့ ဖြည်းဖြည်းအေးအေး ဖတ်မယ်ဆိုပြီး မရောက်ဖြစ်ဘူး..။ ဆောရီး.
စကားမစပ် မမသွယ်? တို့အသိ မမသွယ်များလား (သစ်တောက)
အချိန်လေးရမယ်ဆိုရင် တခြားဆောင်းပါးတွေ ရေးနေတာရပ်ထားပါဦး။ ဒီမိုယောကျားတွေ အခြောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဆုံးမဖို့ ဆောင်းပါးလေးတွေရေးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သူတို့က အွန်လိုင်းမှာတောင် စစ်သားတွေကို ချေးထွက်မတတ် ကြောက်နေကြတယ်။ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေး ဘလော့ဆိုရင် တစ်နေ့ကို လူတစ်သောင်းဝန်းကျင်အထိ ဖတ်ရှုပါတယ်။ ပဲခူးလူသတ်တဲ့ကိစ္စကို စစ်ဗိုလ်တွေက ဒေါက်တာလွမ်းဆွေဘလော့ရဲ့ ကော်မန့်မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကို ထောက်ခံနေပါတယ်။ ဒီမိုယောကျား ၃ ယောက်လောက်ကပဲ စစ်ဗိုလ်တွေကို ယှဉ်ပြီးပြောရဲပါတယ်။ တစ်သောင်းမှာ ၃ ယောက်ကပဲ စစ်ဗိုလ်တွေကို ယှဉ်ပြီးပြောရဲတဲ့သူပဲ ရှိတဲ့အဖြစ်ဟာ အစ်မတို့ ဒီမိုတွေအပေါ် အထင်သေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပိတောက်မြေနဲ့ ကျေးစေတမန် ဘလော့မှာလည်း ဒီမိုယောကျားတွေ အသံမထွက်ရဲပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမှန်တရားအတွက် နည်းနည်းပါးပါးလေးတောင် မပြောဆိုရဲဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပြင်မှာ သေနတ်ကိုင်ထားသူတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲမှာလဲ? ဒါ့ကြောင့်.. စစ်သားတွေရဲ့ကွယ်ရာမှာ နအဖကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ ဒီမိုယောကျားတွေကို … အွန်လိုင်းမှာ စစ်သားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးပြောဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါဗျာ။ စစ်သားတွေဆဲမှာကို ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောတာဆိုရင်တော့ ဒင်းတို့ကို သနတ်ခါးလေးလူး… ထမိန်လေးဝတ်ပြီးနေဖို့ပြောပေးပါဗျာ။
ဟလို... မိုးကောင်းကင်ကြီး ..
အင်း.. တကယ်တော့ တခါတလေ ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးသင့်သလို တခါတလေတော့လည်း နုလုံးသားကို ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆတာမျိုး ရှိတာကောင်းမယ်ထင်တာပဲ..။
ိပိုးမွေးထားတဲ့ ပန်းဆိုရင်တော့ မဟန်ဘူးဗျ
မှန်တာပေါ့.. ပိုးကိုက်ပန်းကိုတော့ သွားနမ်းလို့ မဖြစ်ချေဘူး.. :)
နောက်တခါ ပိုးကိုက်တဲ့ ပန်းနဲ့ မတွေ့ ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်း.....
အင်း ပန်းကိုယ်တိုင်က ပိုးကိုက်တာနှစ်သက်နေတယ်ဆိုရင်တော့
နှလုံးသားအတွက်...ဦးနှောက်က ပန်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ပန်းမျိုးကိုပဲရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။
အင်း... အကြောင်းကတော့ မတိုက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဒပေမယ့် စဉ်းစားစရာတော့ ရခဲ့တယ်။ ပန်းလေးကိုယ်တိုင်က ပိုးကိုမှ နှစ်သက်ပြီး မွေးမြူထားတယ်ဆိုတော့ ပန်းချစ်သူလည်း ပိုးကိုပါ ချစ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်တယ် ထင်တာပါပဲ။